PVC Double waalka kubada
Fiilooyinka Cement Double Union Ball Valves waxay leeyihiin laba darajo oo midow ah si markaa waalka looga yareyn karo dhuumaha dib u habeynta ama dayactirka. Farsamooyinka ayaa loo heli karaa sida PVC Double Union Ball Valves oo leh xargaha iyo dhammaadka dareeraha ee cabirka imbaraadooriyada.
Farsamooyinkayaga 'PVC' wuxuu siiyaa iska caabin badan kiimiko kala duwan, marka lagu daro bixinta saameyn sare iyo xoog silig. Si fudud loogu soo ururiyey daboolid qumman xaaladaha oo dhan, Our Double ball valves waxaa loo isticmaali karaa codsiyo kala duwan waxayna ku shaqeeyaan cadaadis shaqeynaya oo gaaraya illaa 16 bar, oo ku tiirsan cabirka.
Cabir: 32-110 1 "-4"
1. Cabbirka 1 ″ ilaa 4 ″
2. ANSI 、 BS 、 DIN 、 Heerka BSPT waa la heli karaa
3. Iyada oo dunku dhammaado ama uu dhammaado godka
4. Ku rakibid fudud oo leh miraha midowga oo gacanta lagu adkeeyay
5. Kala-goynta khadka fudud oo aan lagu rakibin ururo dheeraad ah
6. Naqshadeynta dekedda oo buuxa xaddidaadda socodka ugu yar
7. Xirxirida Jumlada ama baakad shaqsiyeed oo ay ku jiraan sanduuq
Hore: Shiinaha Qiimo jaban Upvc Ball Madax - PVC Compact Ball Valve- Socket / Thread - GreenPlains
Xiga: Ball Waraabka Madax
PCV Double Union Ball Madax
PCV Single Union Ball Madax
Kubad Upvc Ball
Xarafka Ball-ka ee UPVC
UPVC Compact Ball Madax
UPVC Octangal Ball Madax
PVC Hal waalka kubada midowga
Layflat feedh- Dragon
Qalabka Air- Uni
Alfa PC qalajiye
Waxaan u adeegsannaa cookies si aan u hagaajino naqshadeynta degelkeenna. Markaad ku sii wadato booqashadaada websaydhka, waxaad ogolaatay isticmaalka cookies-ka. [Macluumaad dheeraad ah]OK